Mpiblaogy misongadina: Rakotomanarivo Tahina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2010 15:19 GMT
Ny namana Rakotomanarivo Tahina dia miblaogy monina ao Antananarivo, renivohitry Madagasikara. Nandray anjara tamin'ny atrikasa fanajariana ny fijoroana vavolombelon'ny andrimasom-bahoaka [ndlr. vaovaon-olo-tsotra no andikan’ i Jentilisa ny hoe citizen media] izay nokarakarain'ny FOKO, izay fikambanana mpiaramiasa amin'ny Rising Voices any Madagasikara, hatreo no niovan’ ny fiainany sy ireo mpiray dia taminy anivon'ny fikambanana miteny Anglisy [ICE].
Nanome alalana tamin'ny sary: Annie Rasoa
Nosokafany ny blaoginy ‘Madagascar not the Movie‘ [Madagasikara fa tsy ilay sarimihetsika], satria sitrany ny hanova ny fijeritokana izay apariaky ny fantsona fampahalalam-baovao izay matetika mampifandray an'i Madagasikara sy ilay lahatsariitatry Disney mitantantara ireo biby nandositra avy amin'ny valan-javaboaharin'ny tànanan'i New York rehefa mikaroka anivon'ny Aterineto izy ireo. Tsy ela izy dia tsikaritry ny fantsona fampahalalam-baovao amin'ny herimpony hampita vaovao manazava ny korontana ara-politika any an-tanindrazany. Araky ny tatitra nataon'ny vohikala AllAfrica.com tamin'ny volana Martsa 20009:
Tahina dia anisan'ireo mpiblaogy sy mpandefa twitter mavitrika any Madagasikara, isan'ireo tanora Malagasy izay nobeazina tamin'ny Aterineto sady mampiasa ny totonlon'ny Aterineto mba hanapariahana ireo vaovao sy hevitra mikasika ny fiainam-politika any an-tanindrazana.
Tahina dia mbola isan'ireo niara-niasa mba hametrahana sy hampandehanàna ny vohikala Ushahidi, izay nandrombaka ny amboaran'ny vohikala fanangonana sy fanapariahana ireo fijoroana vavolombelon'ny andrimasom-bahoaka mandritra ny korontana ara-politika.
Nitafatafa tamin'i Tahina tamin'ny alalan'ny imailaka izahay te hahafantatra bebe kokoa izay mombamomba azy. Indreto ireo fanontaniana sy ny valinteniny:
RV: Ny mba hianàrana teny Anglisy no namonjenao ny fikambanana miteny Anglisy ICE – Nahoana? Fa angaha moa fampiasa andavan'andro any Madagasikara ny teny Anglisy?
Tahina: miaraka amin'ny namana akaiky dia isan'ireo izay nanangana ny fikambanana miteny Anglisy ICE ny tenako. Tsy dia azo ambara loatra ho fampiasa andavan'andro any Madagasikara ny fiteny Anglisy, tsy mitsahatry ny mitombo anefa ny isan'ireo Malagasy maniry ny hifehy ity fiteny iray ity. Heveriko fa fantatr'izireo fa afaka hanome velarana midadasika kokoa hoan'izay mahafehy azy izany fiteny izany.
RV: Oviana ianao no nandre izay mombamomba ny fikambanana FOKO? Ahoana no nandraisanao anjara tamin'ny atrikasa novoizin'ny FOKO?
Tahina: ny namana Razafimaraho Joan [ndlr. iarahan'ireo mpivoy Aterineto Malagasy mahafantatra amin'ny solon'anarana hoe Jogany] no nanantona anay [ICE Club] tamin'ny alalan'ny blaoginay sady nanazavazava ny mombamomban'ny fikambanana FOKO. Raha tsara ny fitadidiako dia tamin'ny volana Jona 2008 izay. Nambarany fa mikasa ny hanao atrikasa fanajariana ny fijoroana vavolombelon'ny andrimasom-bahoaka ny fikambanana FOKO amin'ny volana manaraka izay [ndlr. Jolay-Aogositra 2008 tao Antananarivo] ka dia manasa anay handray anjara. Nahaliana ahy izany ka dia nanapakevitra aho ny hanatrika izany.
RV: Ahoana no fahitanao izany atrikasa izany sy ny fi-blaogiana amin'ny ankapobeany?
Tahina: Tsara ny fahitako azy amin'ny ankapobeany. Nambara taminay ny tantaran'i Kamba sy ny andraikitra izay noraisin'i Diana (niaraka tamin'ny mpiblaogy hafa ary fikambanana koa raha tsy diso aho). Midadasika ny tontolon'ny fanaovana blaogy hany ka mety mahavery am-piandohana, rehefa manomboka mahafantatra ireo mpiblaogy sy izay lohahevitra zarainy ianao vao tena mahatsapa ny maha-tena tontolo mahaliana azy.
RV: Ambarambarao amiko izay mikasika ny blaoginao. Inona no antony nifidiananao ny lohateny `Madagascar not The Movie’ [Madagasikara fa tsy ilay sarimihetsika]?
Tahina: ny nosy Madagasikara no lohahevitry ny blaogiko. Taorian'ny atrikasa novoizin'ny FOKO dia nitady izay lohahevitra hoan'ny blaogiko aho, tsy nitady lavitra aho fa nahoana tokoa moa raha ny tanindrazako sy ny mponina ao aminy. Heveriko fa tsy izaho irery no mihevitra fa anivon'ny tontolo Aterineto dia takonàn'ny sarimihetsika izay mitovy anarana aminy ny tanindrazanay. Ny hanohitra izany no anton'ny lohatenin'ny blaogiko.
RV: Inona no mampiavaka ny fanaovana blaogy amin'ny teny Anglisy any Madagasikara?
Tahina: Matetika ny mpamaky. Araky ny pejy mirakitra ny isan'ireo mpamangy dia avy amin'ny firenena miteny Anglisy ny ankamaroan'ireo mpamaky ny blaogiko.
Nanome alalana tamin'ny sary: Kya Rafun
RV: Amin'ny fomba ahoana no niovan'ny fiainanao vokatry ny blaogy, indrindra taorian'ny korontana ara-politika mitranga any an-tanindrazanareo?
Tahina: Nanome ahy fahazarana ny tontolon'ny Aterineto sy ny blaogy izay hitoetra ela ato an-tsaiko.
RV: Heverinao ho manana ny lanjany hoan'ny mpiblaogy ve ny fiheverana ny lohahevitra amin'ny lafiny ankapobeany sy iraisam-pirenena mba hisian'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny olona samihafa fihaviana?
Tahina: Miankina amin'izay tanjon'ny blaoginao izany. Misy eo amin'ny olona samihafa fihaviana ny fifanakalozan-kevitra rehefa mahakasika ny fiainan'ny hafa izay lohahevitra voaboasanao.
RV: Mavitrika amin'ny fampiasana Twitter koa ianao. Inona no tombony amin'ny fampiasana io fomba `micro-blogging’ iray manokana io?
Tahina: Mipariaka faran'izay haingana izay tianao ambara sady izay zavatra manan-daja ihany no soratanao. Tsy mila fotoana lava ny fehin-kevitra.
RV: Mpaka sary mahay sady mampiasa ny vohikala tahirintsary Flickr koa ianao. Mba ambarao kely izay fihevitraoo ny fanaovana blaogintsary.
Tahina: Nandritra ny atrikasa fanajariana ny fampiasana ny fakantsary izay novoizin'i Tibora Bea izay nokarakarain'ny FOKO dia nazavaiko ny anton'ny itiavako maka sary. Tsindraindray dia mahalaza kokoa ny tiako ambara sady izay indray tsy dia ankafiziko loatra ny fanoràtana lahantsoratra. Mitovitovy ny fijerinay sy Ariniaina [ndlr. mpivoy ny blaogy DagoTiako] amin'io lafiny iray io.
RV: Inona ireo fahasarotana izay tsy maintsy atrehina rehefa miblaogy?
Tahina: Ny tena olana dia ny fidirana amin'ny Aterineto. Ny vidiny midangana kanefa ny fifandraisana ratsy. Tena mampijaly mihitsy ohatra ny mamahana sary sy lahantsary amin'ny Aterineto. Tsindraindray na dia ny fidirana amin'ny fampiasana ny WordPress [ndlr. vohikala mitahiry ny bllaoginy] dia efa maharitra minitra maro vao mitranga.
RV: Taloha ianao dia tena mpiblaogy navitrika tokoa, somary nihena anefa izany tato ho ato, inona ange no antony?
Tahina: Ny asako no antony. Mila mifantòka bebe kokoa amin'izay asa ataoko aho ankehitriny.
RV: Mikasika ny hoavin'ny fijoroana vavolombelon'ny andrimasom-bahoaka manokana, inona nokasainao amin'ny hoavy?
Tahina: Hotohizako ny blaogiko, ny fotoana no mbola miandry izay androny satria mihevitra ny hizotra amin'ny fanaovana blaogintsary indray aho.
Mankasitraka an’ity lahatsoratra ity. I Tahina dia tena mpiblaogy misongadina tokoa. Olona mpanetry tena izay izy nefa ny zava-bitany dia tena goavana hatrany. Izahay namany dia manohana azy tanteraka.
Tohizo foana Tahina a. Mahafinaritra 🙂
07 Mey 2010, 17:35
Mankasitraka e, hetseho hatrany ny tontolo fa io no hanampy antsika rehetra amin’ny fahitana ny lalana mazava tokony harahina.
20 Mey 2010, 07:18
Tena izay aho vao tafajery an’ity lahatsoratra ity. Misaotra anareo rehetra manoana na dia tsy dia misy fotoana hanoratana intsony aza tato ho ato.
23 Jolay 2010, 14:07